PressReader - Ilanga: 2018-02-12 - ISafa ichithe umhlangano waseKZN
ISafa ichithe umhlangano waseKZN
Usola ukunyundelwa ngegama likaSexwale
Ilanga - 2018-02-12 - Ezemidlalo - PHILANI NCALANE
BASAZOLINDA abagaqele izikhundla kwiSouth African Football Association (Safa) KwaZuluNatal njengoba kumisiwe ukukhethwa kobuholi obusha emhlanganweni wayizolo ngeSonto eMoses Mabhida Stadium.
Kulo mhlangano kuphasiswe umthethosisekelo wesifundazwe okusamele uyobhabhadiswa wubuholi bukazwelonke. Kuthiwa abaholi besifundazwe bamiswe yihhovisi leSafa kuzwelonke ukuqhubeka nokukhetha ngenxa yokuthi kunezinto okumele zilungiswe kubalwa nokuqokwa kobuholi obusha ezifundeni zale nhlangano.
Kuthiwa incwadi ebhalwe nguThemba Phiri weSafa uThukela yiyona eholele ekutheni kuhlehliswe ukukhethwa.
UPhiri ubhalele iSafa ebuza ukuthi buzokhethwa kanjani ubuholi obusha kunenqwaba yezifunda ezingakabi nobuholi obusha. UPhiri uphinde akhale ngo- kuthi ubuholi besifundazwe abukaze buhlangane bunqume ngokhetho. Uthi yiFootball Transformation Forum (FTF) ebinomhlangano.
UPhiri uthi useyilungu elithembekile leFTF futhi umeseka ngokugcwele uDanny Jordaan ekuthatheni ihlandla lesibili lokuhola iSafa. Uthi kunabathile abamnyundela ngokuthi usepheshulwe wumoya wajoyina umkhankaso weNkosi Mwelo Nonkonyana. UNonkonyana ukhankansela uTokyo Sexwale ekuthatheni isikhundla sikaJordaan okhethweni oluzokuba mhla zingama-24 enyangeni ezayo.
UPhiri uthi ukuba yiFTF akuchazi ukuthi kumele avumele kuthathwe izinqumo ezizoholela ekutheni iSafa iphonselwe inselelo kuze kuyiswane ezinkantolo. ISafa uThukela, iSafa AmaJuba neSafa eThekwini bebengekho emhlanganweni wayizolo.
UThukela namaJuba bebechaza umhlangano wayizolo njengowasehlathini, kanti iTheku likhahlelelwe ngaphandle ngenxa yemiba- ngo engapheli yokuhola lesi sifunda. Izifunda okuthiwa kusamele zikhethe ubuholi yiLembe, iHarry Gwala, uMzinyathi neZululand. UBright Gumede ukhethwe ngoMgqibelo esikhundleni sokwengamela iSafa King Cetshwayo Region.
UPhiri ubanga isikhundla sikasihlalo noKwenzakwakhe Ngwenya waseMkhanyakude. USimphiwe Xaba ongomunye wabaholi beSafa esifundazweni ukuqinisekisile ukuthi akukhethwanga izolo.